နေအိမ် » စွန့်စားမှုအားကစားပြိုင်ပွဲ » Crazy Running
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Crazy Running
ဖေါ်ပြချက်: တစ်ဦး parkour ဂိမ်းဖြစ်သည့်အရူးအပြေးသည်, စင်ပေါ်မှာလာမယ့်နေပါသည်! ဒီဂိမ်းခေတ်ရေစီးကြောင်းတကလစ်စစ်ဆင်ရေးသုံးပြီးပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ရယ်စရာအတွေ့အကြုံကိုဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ဂိမ်းထဲမှာသင်ရန်သူကိုသတ်ပစ်ရန်ဒုံးပျံယူနိုင်ပြီး, ကိုလည်း Bu ဖို့မီးတောက်များကိုသုံးနိုင်သည်
ထိန်းချုပ်ရေး: Crazy Running, which isaParkour game, is coming on the stage! This game will bring more exciting and funny experience with using mainstream one-click operation. In the game, you can takearocket to kill the enemy, and also can use the flames to burn the enemy, or you can use the feet to kick the enemy away. Crashing the obstacles, and along with the progress of game to improve the running speed unceasingly, and see how long you can keep it up! Collectalot of precious stones along the way, which is crazy and exciting! This game will let you fondle admiringly with the lighter style, funny action, new 2D view and exciting game rhythm
ကစား: 20,680 tag ကို: crazy games, ပြေး, အပြေးဂိမ်း
scooby Doo ကြယ်များယှဉ်ပြိုင်
Scooby ကြယ်လူမျိုး: Scooby ကြယ်လူမျိုးသင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကို select လုပ်ပါနှင့်ကွဲပြားခြားနားဇာတ်ကောင်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်အပေါင်းတို့, 10 စိတ်ဝင်စားစရာအဆင့်ဆင့်ဖြည့်နှင့်သင့်ဇာတ်ကောင်အဆုံးစွန်စူပါပြိုင်ကားသမားကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဟာအလွန်အေးမြပြိုင်ကားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဆိုက်ဘာလောကအကြောင်းဘာသိရသလဲ ကျနော်တို့ကိုလည်းအကြောင်းနီးပါးဘာမှသိ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အတိအကျသိတစ်ခုတည်းသောအရာမကလက်တွေ့မှမတူ။ သငျသညျအိပျပျြောသို့မဟုတ်သင်ကွန်ပျူတာထိုင်နေသည်နေစဉ်သင့်ရဲ့ကို virtual အမွှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာမီတာဖို့အချိန်င်
ဂိမ်းခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုမှကစားရန် Arrow key တွေကိုသုံးပါနဲ့: P ။
scooby Doo ဟယ်လိုယင်ကောင်
အဟယ်လိုညဉ့်အခါ, နတျဆိုးရွာသားတိုက်ခိုက်ခြင်း။ Scoobydoo ရွာသားများကယ်ဖို့အားလုံးမိကျောင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ task ကိုလက်ခံရရှိသည်။ scooby Doo နတ်ဆိုးများကိုသတ်ကိုကူညီပါ။
Batman Batman, ဥမင်မှလွတ်မြောက်ရန်ပျက်စီးနေလမ်းကြောင်းကိုကျော်ခုန်ပြီးမြင့်မားသောရမှတ်လုပ်ရှိသမျှကိုလင်းနို့စုဆောင်းဖို့ကိုကူညီပါ, ဂျိုကာလိုက်ဖမ်းခဲ့ပါတယ်နှင့်ယခု Batman ဥမင်ထဲမှာဝဲနေသည်။
scoobydoo position နဲ့ဆက်ဆံစက်ဘီး
Scoobydoo အားကစားကွင်း၌ရှိ၏သူသည်ရည်မှန်းချက်မြင့်မားရမှတ်လုပ်ရယူပါတဲ့မှ position နဲ့ဆက်ဆံအကူအညီနဲ့ scoobydoo ဖျော်ဖြေခြင်းအားဖြင့်ပရိသတ်ကိုအထင်ကြီးဖို့ကြိုးစားနေသည်။
အရူး Hangover3သင်တစ်ဦးကိုကျောက်တီးဝိုင်း, အရက်များကိုစာရေးတံ, ပရိသတ်တွေအများကြီးနဲ့တစ်တောလယ်ယာတစ်ဦးမာနထောင်လွှားခဲအဆိုတော်ရောထွေးလာသောအခါသင်သည်အဘယ်သို့ရနိုင်သလဲ ဒီရယ်စရာစွန့်စားမှု Play နှင့်ဤအရူးပါတီအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ထွက်ရှာပါ။
လူကို PSY Gangnam စတိုင်အပြေး
က Man Psy Gangnam Style ကို Running ။ Gangnam Style ကိုမှ Psy က Man အဖြစ်အပျက် Running ထဲမှာအထောက်အကူဖြစ်စေလျှင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ! ဤနေရာတွင်၎င်း၏အဖြေ
PSY ကသီချင်း Gangnam Style ကို၏ကွက်မေ့လျော့ကိုရီးယားအဆိုတော်ခဲ့သလား တစ်ဦးဇာတျလမျးကိုရွေးချယ်ပါနဲ့ထပ်ကြိုးစားရန်ခြေလှမ်းများယူပါ။ သင်သည်သင်၏စိန်ခေါ်မှုဖြည့်စွက်ခုန်ခြေလှမ်းများရိုက် ...
Gangnam Style ကိုအလွယ်တကူယခုလည်းအမေရိကနှင့်ဥရောပအရူးရှိလူများ, နှင့်ကမ္ဘာပုံစံဖြစ်လာသည်ကြကုန်အံ့ rhythem ဟစ်ဟော့စတိုင်, ထူးခြားတဲ့မြင်းခြေလှမ်းများနှင့်ဆွဲဆောင်ဂီတနှင့်အတူ MVPSY အတွက်အားလုံးလူမျိုးသိမ်းပိုက်။ ထိုသို့ကြိုးစားရန်လာကြ!
2006 ခုနှစ်၏ကြီးမားသောကျူးကျော်အံ့သြခြင်းအားဖြင့်မြေတပြင်လုံးသည်ကမ္ဘာမြေကိုယူ။ အဆိုပါလူဦးရေ 300 ကျော်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ သင်ဤရန်ပွဲတွင်ပါဝင်။ သငျသညျမစ်ရှင်ဌာနချုပ်များ၌နှင့်ကျူးကျော်လာသူတွေကအကြောင်းအလှနျအရေးကွီးသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Tom နှင့် Jerry သံမဏိဒိန်ခဲ
ဂျယ်ရီတ္ထုကိုကျော်ခုန်နှင့်သူတွမ်ရဲ့အရသာရှိတဲ့သရေစာဖြစ်လာသည်ရှေ့တော်၌မိမိ mouse ကိုအပေါက်မှ run ကူညီပါ!